Maxamed Cabdilaahi Uurcade oo ka hadlay xil-ka-qaadistii lagu sameeyay iyo eedaymaha lagu ladhay ee loo cuskaday xil-ka-xayuubintiisa – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Maxamed Cabdilaahi Uurcade oo ka hadlay xil-ka-qaadistii lagu sameeyay iyo eedaymaha lagu ladhay ee loo cuskaday xil-ka-xayuubintiisa
Allhadaaftimo April 17, 2018 Uncategorized
Runtu Waxay Tahay Guddoomiyuhu Soomaaliya U Jawaabideeda Ayaa Gubaysa
“Arrintaa uu dhoobdhoobay guddoomiyuhu waa qayrul-sharci umana hogaansamayo mana ogoli.”
Hargeysa (Hubaal) Maxamed Cabdilaahi Uurcade Xoghayihii guud ee xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani ayaa ka hadlay xil-ka-qaadistiisa ay guddida fulinta ee xisbigaasi ku sameysay. Waxaanu ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn hanaankii loo maray xil-ka-qaadistiisa, isla markaasina aanay u dhanayn, guddida fulinta ee xisbigu. Maxamed Cabdilaahi Uurcade waxa uu sheegay inaanu marnaba u hogaansamayn islamarkaana ogolaan doonin, xil-ka-qaadistiisa oo uu ku tilmaamay koox uu guddoome Cirro soo abaabushay.
“Cirro waxaan leeyahay, waxaad u yeedhay oo aad shir u qabatay tiro aan dhamayn oo aad ku sheegtay guddidii fulinta, oo ay intii badnayd dibedda ka joogtay, qaarna ay kaa baxeen. Runtii aad iyo aad baan uga xumahay inaad xisbiga dhexdiisa kala naqaysato oo in adiga ku ogol aad shirka ugu yeedho. Guddoomiye waxaan ummada u sheegayaa, in arinkaasi aanu waafaqsnayn shuruucda dalka iyo ta xisbigaba, sidaa daraadeedna, anigu umana hogaasami, mana ogoli, waxaa uu guddoomiyuhu uu soo dhoobdhoobay, waxaan yeelayona gadaal baan ka sheegayaa.
Maxamed Uurcade sidoo kale waxa uu ka hadlay isla markaana uu ku tilmaamay wax aan sal iyo raadtoona lahayn, eedeymaha loo cuskaday xil-ka-qaadistiisa, “Guddoomiye-cirro wuxuu igu eedeeyay, inaan isku diraayo, degaan iyo xisbi. Halkaa waxaan leeyahay guddoomiye, beesha Baligubadle iyo Cabdiqaadir Jirde waxaynu kula heshiinay inaad guddoomiyenimada ku wareejiso marka doorashadu dhacdo, taasina isku dir maaha, ee waa garsoor. Deegaanka Bariga gobolka Sanaag waxay xaq u leeyihiin, haddii xoghayah guud oo aniga ahi aan xilka banneeyo, sabab kasta aan ku banneeyo ‘e, in lagu wareejiyo xoghaye-ku-xigeenka, Jamaal Cali Xaamud oo xaq u leh in la dhaafiyana aanay ahayn. Guddoomiye haddaad inan yar jeebada kusoo qaadatay oo adeer u tahay, oo aad tidhi xilka ku wareeji oo fasax gal ma xaqsoor baad samaynaysay.” Ayuu yidhi Uurcade, waxaanu intaasi ku daray; “Guddoomiyuhu waxa kale oo uu igu eedeeyay inaan turxaan kala dhexdhigaayo siyaasiyiinta iyo xisbiga, halkaasna waxaan leeyahay, guddoomiye, waxaan sheegay rag siyaasiyiin ah, uu kamid yahay Cabdiqaadir Jirde iyo Gaboose oo xisbiga ka tirsan, tacabna galiyey, awoodna Illaahay u siiyay inay guul u keeni karaan doorashada, kuwaas oo hadalkoodu sida dhimbiisha kuu gubay. Ayuu yidhi.
Mr. Uurcade isagoo ka hadlaya asbaabihii xisbigu u cuskaday xil-ka-qaadista lagu sameeyay, ayaa waxa uu soo qaatay qodob kale oo uu sheegay inay kamid tahay, waxyaabaha guddoomiye-cirro ka godooday, waxaanu yidhi;
“Cirro waxa uu aniga igu eedeeyay inaan kasoo horjeestay go’aankii xisbigu gaadhay ee tusaalaha usoo qaatay, DP World iyo saldhigga Milateri ee Berbera. Waxaan leeyahay guddoomiye, aan ku saxo’e anigu waxaan u jawaabay dawladda Soomaaliya oo dalkeenna cadow ku ah, oo tidhi Somaliland lama maalgashan karo. Ummadna hoggaamiyaheedu waa nin run ku wada, ee nin been kuwadaa hoggaamiye ma noqdo. Waxaan anigu fadhiyay shirkii gurigaaga ee golaha wakiillada oo dhami ay go’aan ku gaadheen in laga hortago, ninka habeenkii burbiyay ee jebiyay, sabab kasta ha ahaatee, ee aroortii ay xildhibaannadii wadajir iskugu raaceen in loo ogolaado, adiga ayuu ahaa ee aniga ma ahayn. Arrinta Cirrooy ku gubaysaa taas maaha, ee waxa gubaysa Soomaaliya U Jawaabideeda. Ayuu yidhi Mr. Uurcade, oo ugu dambayn farriin gaar ah u diray taageerayaashiisa iyo bulshada reer Somaliland. “waxaan beeshayda, taageerayaashayda iyo bulshada Somaliland u sheegayaa, in arrintaasi ku kooban tahay Cirro guddoomiyaha
Previous : MD Abdi wali Gaas oo Raalin Gellin siyay Emaraadka sheegayna in Dacaayadna lagga fidiyey in Askar Airportka Bosaaso lagu Bahdallay waxana Fidfiyey buu yiri Weriye Haruun Macruuf
Next Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in lacagtii 8-dii bishan lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho qeyb ka mid ah loogu tala galay Ciidamada Puntlan